जन्मिदै कोही पनि सफल र भाग्यमानी ट्याग लिएर आउँदैन,यसरी बन्ने हो जिवनमा सफल/भाग्यमानी - Rising Dainik
जन्मिदै कोही पनि सफल र भाग्यमानी ट्याग लिएर आउँदैन,यसरी बन्ने हो जिवनमा सफल/भाग्यमानी
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on जन्मिदै कोही पनि सफल र भाग्यमानी ट्याग लिएर आउँदैन,यसरी बन्ने हो जिवनमा सफल/भाग्यमानी
एजेन्सी/ जीवनमा विभीन्न समयमा दान तथा पूर्ण कर्म गरि सुभफल प्राप्त गर्न सकीन्छ ,तल उल्लिखित विधिअनुसार दान गर्नाले धेरै पूर्ण प्राप्त गर्न सकिन्छ। दान गर्दा पुण्य मिल्ने तथा जानी नजानी गरेका पापको कर्मको फल समेत नष्ट हुने धार्मीक विश्वास गरिँदै आइएको छ। शास्त्रमा दानको विशेष महत्वको व्याख्या गरिएको छ। यस पुष्य कर्मबाट समाजमा समान्ताको भाव झल्किने विश्वास गरिएको छ।
आज हामीले शास्त्रमा उल्लेख गरिएका दानसँग सम्बन्धित केही कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ :१) गरुड पुराणका अनुसार अन्न, पानी, कपडा, आसन यी ४ बस्तुको दान वर्षमा एक दुई पटक गर्न जरुरी छ। यी ४ कुरा दान गर्दा लामो समयसम्म फल मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
२) जो व्यक्लिे पत्नी, पुत्र एवम् परिवारलाई दुख बनाएर दान गर्छ भने त्यो व्यक्तिले पुण्य प्राप्त नगर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। दान सबैलाई प्रसन्न गरेर गर्न आवश्यक छ।३) सहयोगको आवश्यकता परेका व्यक्तिको घरमा गएर गरेको दान सबै भन्दा राम्रो मानिने गरिन्छ। सहयोगको आवश्यक परेका व्यक्तिलाई घरमै बोलाएर दिएको दानले मध्यम फल प्राप्त गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।४) यदी कोही व्यक्तिले गाई दान गर्ने तथा ब्राहमणलाई विभिन्न बस्तु दान गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गर्न रोक्न हुँदैन।
दान गर्न रोक्ने व्यक्ति पापको भागेदार बन्ने शास्त्रमा उल्लेख छ।५) तिल, कुश, जल र चामल यी बस्तु हातमा लिएर दिन आवश्यक छ। अन्यथा उक्त दान दैत्यको प्राप्त हुने विश्वास छ।६) दान दिने व्यक्ति पूर्व दिशा र लिने व्यक्ति उत्तर दिशामा हुन आवश्यक छ। यस्तो गर्दा दान दिने व्यक्तिको आयु बढ्ने तथा दान लिने व्यक्तिको आयु कम नहुने विश्वास गरिन्छ !
मुन्द्रेको ‘कमेडी क्लब’बाट दिपाश्री निरौलालाई किन ह’टाइयो ? खुल्यो यस्तो र’हस्य
February 4, 2021 February 4, 2021 Ramash Kunwar